Isizathu Sokuba Sifune UThixo
IMboniselo | Disemba 2013
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBengali IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMongolia IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPapiamento (saseAruba) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiVenda IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
INQAKU ELINGUMXHOLO | NGABA SIYAMDINGA UTHIXO?
Iingcali zengqondo zithi abantu abonwatyiswa zizinto abanazo kuphela. Ubungqina boko sibubona kwindlela abantu abafuna ngayo ukuphila ubomi obunenjongo okanye ukukhonza umntu okanye into ebalulekileyo kunabo. Ukuze bakwenze oku, abanye banikela ixesha labo kwindalo, kwizinto zobugcisa, emculweni, njalo njalo. Ukanti abaninzi abafumani lwaneliseko kwizinto ezinjalo.
UThixo ufuna abantu bonwabe ngoku nangonaphakade
Isibakala sokuba abantu belangazelela ukwazi uThixo asibothusi abafundi beBhayibhile. Izahluko zokuqala zeGenesis zithi emva kokuba uThixo edale uAdam noEva, wayesoloko ethetha nabo, ukuze bamazi. (Genesis 3:8-10) Xa uThixo wayedala abantu, wayengafuni baziphilele ngaphandle kwakhe; kwakufuneka bathethe noMenzi wabo. IBhayibhile isoloko ithetha ngobu buhlobo bukaThixo nabantu.
Ngokomzekelo, uYesu wathi: “Banoyolo abo bayiphapheleyo intswelo yabo yokomoya.” (Mateyu 5:3) Loo mazwi asenza sibone ukuba ukuze sonwabe size saneliseke ebomini kufuneka simazi uThixo. Sinokukwenza njani oko? Lo mbuzo uYesu wawuphendula ngala mazwi: “Akaphili ngasonka sodwa umntu, uphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaYehova.” (Mateyu 4:4) Imiyalelo kaThixo eseBhayibhileni isinceda njani sikwazi ukuphila ubomi obonwabisayo nobunenjongo? Makhe sifunde iindlela ezintathu ezibalulekileyo.
Kufuneka Sifumane Ulwalathiso Olufanelekileyo
Namhlanje zininzi iingcaphephe ezinamacebiso kubantu abathandanayo, kubomi bomtshato, kwindlela yokucombulula iingxabano, kwiindlela abanokonwaba ngazo abantu kwanakwintsingiselo yobomi. Sekunjalo, ngubani oyena mntu ukufanelekele ngokupheleleyo ukunikela ulwalathiso olusengqiqweni kwezi zinto ngaphandle koMenzi wabantu, uYehova uThixo?
Njengencwadi ephuma nesixhobo esithengiweyo, iBhayibhile isixelela indlela esimele siphile ngayo
Ngokomzekelo: Xa uthenga into efana nekhamera okanye ikhompyutha, ulindele ukuba ifike inencwadi yayo echaza indlela esetyenziswa ngayo. IBhayibhile ifana kanye naloo ncwadi. Yincwadi esichazela indlela esimele sibuphile ngayo ubomi esibunikwe nguThixo. Kaloku, le ncwadi ifika nento oyithengileyo ichaza ukuba yenzelwe ntoni nendlela emele isetyenziswe ngayo ukuze ihlale ixesha elide.
Njengale ncwadi ke, iBhayibhile ilumkisa abantu ngezinto ezinokubangela ukuba bangonwabi ebomini. Amacebiso anikelwa ngabantu asenokubonakala esebenziseka okanye kulula ukuwenza, kodwa ngaba ayikho ngqiqweni into yokuba awona macebiso afanelekayo nanokusenza singangeni ezingxakini ngalawo siwanikwa nguMenzi wethu?
“Mna, Yehova, ndinguThixo wakho, Lowo ukufundisa okuyingenelo kuwe, Lowo ukubangela unyathele endleleni ofanele uhambe ngayo. Owu ukuba nje kuphela okunene ubunganikela ingqalelo kwimiyalelo yam! Ngoko uxolo lwakho beluya kuba njengomlambo, nobulungisa bakho njengamaza olwandle.”—Isaya 48:17, 18
EBhayibhileni, sinokufumana ulwalathiso noncedo esilufunayo
Nangona uYehova uThixo esinika imiyalelo, akasinyanzeli ukuba siyenze. Ekubeni esithanda yaye efuna ukusinceda, uthi: “Mna, Yehova, ndinguThixo wakho, Lowo ukufundisa okuyingenelo kuwe, Lowo ukubangela unyathele endleleni ofanele uhambe ngayo. Owu ukuba nje kuphela okunene ubunganikela ingqalelo kwimiyalelo yam! Ngoko uxolo lwakho beluya kuba njengomlambo, nobulungisa bakho njengamaza olwandle.” (Isaya 48:17, 18) Ngamafutshane, ukuba sithobela umyalelo kaThixo, siya konwaba. Ngamany’ amazwi, ukuze sonwabe, kufuneka simazi uThixo.
Kufuneka Sifumane Iimpendulo Kwiingxaki Zobomi
Kuba sisehlelwa zizinto ezininzi ezibuhlungu, abanye bathi akunakwenzeka ukuba kubekho uThixo oluthando. Ngokomzekelo, basenokubuza: ‘Kutheni abantu abalungileyo besehlelwa zizinto ezimbi?’ ‘Kutheni abantwana abangenatyala bezalwa beneziphene?’ ‘Kutheni kungekho bulungisa nje ebomini?’ Le yimibuzo ebaluleke ngokwenene, yaye iimpendulo zayo zingenza ubomi bethu bube nentsingiselo. Kodwa kunokuba simbek’ ityala uThixo ngezi ngxaki, masibone oko kuthethwa liLizwi lakhe iBhayibhile ngalo mba.
Kwisahluko sesithathu seGenesis, sifunda ngengxelo kaSathana, owazenza inyoka, waxelela uAdam noEva ukuba batye kumthi wokwazi okulungileyo nokubi ababeyalelwe nguYehova uThixo ukuba bangawutyi. Wathi kuEva: “Ngokuqinisekileyo anisayi kufa. Kuba uThixo uyazi ukuba mhla nithe nadla kuzo aya kuvuleka amehlo enu nize nibe njengoThixo, nazi okulungileyo nokubi.”—Genesis 2:16, 17; 3:4, 5.
Ngaloo mazwi, uSathana wayetyhola uThixo esithi ulixoki kwaye akalawuli kakuhle. UMtyholi wayesithi, ukuba abantu baphulaphula yena, baza konwaba. Ngoko ke, zaziza kulungiswa njani ezo zityholo? UYehova wayekela ukuba inyani izivelele. Ngokwenza oko, wayevulela uSathana kunye nabo bamlandelayo ithuba lokuba babonise ukuba abantu bangakwazi na ukuphila ngaphandle kwakhe.
Ucinga ukuba izityholo zikaSathana zingqineke ziyinyaniso? Ngaba abantu bangonwaba baze bazilawule kakuhle ngaphandle koThixo? Iintlungu, ukungabikho kobulungisa, ukugula, ukufa nogonyamelo, ukuwohloka kokuziphatha, iimfazwe, ukubulawa kwabantu ngenkohlakalo nezinye izinto ezimasikizi ezithwaxe uluntu ukutyhubela iminyaka zibubungqina obuzicaceleyo bokuba abantu abanakukwazi ukuzilawula. Kunokuba ithi zonke ezi zinto zibangelwa nguThixo, iBhayibhile ithi: “Ngexesha athi umntu alawule umntu iba kukwenzakala kwakhe.”—INtshumayeli 8:9.
Ekubeni sisazi oku, alizicacelanga na elokuba nguThixo onokusinika iimpendulo zemibuzo esinayo ngobomi nesicombululo seengxaki ezithwaxa uluntu? Yintoni aza kuyenza uThixo?
Kufuneka Sifumane Uncedo LukaThixo
Kudala abantu belangazelela ukuphela kokugula, ukuguga nokufa. Baye bachitha ixesha namandla bekhangela iindlela zokuphelisa ezi zinto, kodwa babuya nemband’ esikhova. Abaninzi bakholelwa ukuba ukusela imixube ethile yamayeza, amanzi akhethekileyo okanye ukuhlala kwindawo ethile kungabanceda bangagugi. Yonke le nto iye yaliphupha nje.
UThixo ufuna abantu bonwabe. Leyo yayiyinjongo yakhe xa wayedala abantu yaye ayikatshintshi. (Genesis 1:27, 28; Isaya 45:18) UYehova uThixo usiqinisekisa ukuba akukho nto iya kumthintela ekuphumezeni injongo yakhe. (Isaya 55:10, 11) IBhayibhile isixelela ngesithembiso sikaThixo sokubuyisela iParadesi eyalahlwa nguAdam noEva. Kwincwadi yokugqibela yeBhayibhile kukho la mazwi: “[UYehova uThixo] uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona. Izinto zangaphambili zidlule.” (ISityhilelo 21:4) UThixo uza kukwenza njani oku yaye yintoni thina esifanele siyenze ukuze siphile ngelo xesha?
UNyana kaThixo, uYesu Kristu, wafundisa abalandeli bakhe ukuba bathandazele ukuba kwenziwe ukuthanda kukaThixo. Abantu abaninzi bayawazi lo mthandazo yaye abanye bawenza qho kangangokuba bathi nguMthandazo weNkosi. Uthi: “Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. Mabufike ubukumkani bakho. Makwenzeke ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengasezulwini.” (Mateyu 6:9, 10) Kaloku, uYehova uThixo uya kusebenzisa obu Bukumkani ukuze aphelise zonke iintsizi ezibangelwe lulawulo lomntu aze azise ihlabathi elitsha elinobulungisa. * (Daniyeli 2:44; 2 Petros 3:13) Yintoni ke ngoko esimele siyenze ukuze sinandiphe ezi zithembiso zikaThixo?
Ilula into uYesu Kristu awathi masiyenze: “Oku kuthetha ubomi obungunaphakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, wena ukuphela koThixo oyinyaniso, nangalowo umthumileyo, uYesu Kristu.” (Yohane 17:3) UThixo unokusinceda sifumane ubomi obungunaphakade kwihlabathi elitsha. Elo themba linokukunika esinye isizathu sokuwuphendula ngoewe umbuzo othi, Ngaba siyamdinga uThixo?
Lixesha Lokufuna UThixo
Kwiminyaka eyi-2 000 eyadlulayo, eseAreyopago, okanye iNduli kaMars, eAthene, umpostile uPawulos wathetha nama-Athene awayeziphilela unothanda esithi: “Yena ubanika bonke abantu ubomi nempefumlo nezinto zonke. Kuba ngaye sinobomi siyashukuma yaye sikho, kwananjengoko nabathile kwiimbongi eziphakathi kwenu betshilo ukuthi, ‘Kuba nathi siyinzala yakhe.’”—IZenzo 17:25, 28.
Oko uPawulos wayekuthetha kuma-Athene kusenjalo nanamhlanje. Umoya esiwuphefumlayo, ukutya esikutyayo kunye namanzi esiwaselayo siwanikwe nguMdali wethu. Besingenakuphila ngaphandle kwezi zinto sizinikwe nguYehova. Kodwa kutheni uThixo eqhubeka esenzela bonke abantu ezi zinto, abamfunayo nabangenaxesha lakhe? UPawulos wathi “ukuze bona bafune uThixo, ukuba bangamphuthaphutha baze ngokwenene bamfumane, nangona, enyanisweni, engekude kuye ngamnye wethu.”—IZenzo 17:27.
Uyafuna ukumazi kakuhle uThixo, oko kukuthi, ukufunda izinto ezingakumbi ngenjongo yakhe noko athi masikwenze ukuze sonwabe ngoku nangonaphakade? Ukuba uyafuna, siyakucela ukuba uthethe nomntu okunike le magazini okanye ubhalele abapapashi bayo. Baya kukuvuyela ukukunceda.
^ isiqe. 20 Ukuze ufunde okungakumbi ngendlela uBukumkani obuya kubangela ngayo intando kaThixo yenziwe, funda isahluko 8 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova. Unokuyifunda okanye uyikhuphele kwi-intanethi kwiwebhsayithi ethi www.jw.org/xh.
INQAKU ELINGUMXHOLO Isizathu Sokuba Abantu Babuze Lo Mbuzo
INQAKU ELINGUMXHOLO Isizathu Sokuba Sifune UThixo
IBALI LOBOMI Ukukhonza UYehova Kwaba Ngumsebenzi Wam
SONDELA KUTHIXO “Khangela! Zonke Izinto Ndizenza Ntsha”
‘Ezintabeni Uya Kumba Ubhedu’
TEACH YOUR CHILDREN UYesu Kristu​—Ngaba Ulusana Okanye NguKumkani Onamandla?
AmaNgqina KaYehova Alifumene Njani Igama Lawo?
Disemba 2013 | Ngaba Simfuna Ngokwenene UThixo?
IMBONISELO Disemba 2013 | Ngaba Simfuna Ngokwenene UThixo?